Oxlade-Chamberlain Oo Qalliin Lagu Samaynayo
HomeWararka MaantaOxlade-Chamberlain Oo Qalliin Lagu Samaynayo
Alex Oxlade-Chamberlain ayaa la xaqiijiyey in dhaawaciisu gaadh siisan yahay seeda muruqa bawdada kaas oo ka soo gaadhay ciyaartii rubuc dhamaadka FA Cup-ka Ingiriiska ee ay Arsenal kaga adkaatay is aragii hore kooxda Manchester United kadib markii lagu sameeyey baadhis qoto dheer maalintii Arbacada ahayd ayay natiijadani soo baxday.
Xidiga xulka England ayaa dhaawaciisu yimid shan daqiiqo uun kadib markii la isugu soo noqday qaybtii labaad ee ciyaartii ka dhacday garoonka Old Trafford iyadoo isla markiiba lagu bedelay ciyaaryahan Aaron Ramsey – wixii intaas ka dambeeyeyna waxaa soo baxayay wararka sheegaya inuu ciyaaraha ka maqnaan doono ugu yaraan afar todobaad.
Si kastabase ha ahaatee, Tababare Wenger ayaa ku adkaystay inaanay ilaa hadda jirin ama soo bixin war rasmi ah oo ku saabsan xiliga uu dhab ahaan u soo noqonayo ciyaaryahankani, mar uu ka hadlayay soo kabashada xidigaha Jack Wilshere, Mathieu Flamini iyo Gabriel oo dhamaantood soo noqonaya ciyaarta Sabtida ee horyaalka Premier League ay wajahayaan kooxda West Ham.
“Chamberlain waxaa dhaawac ka soo gaadhay muruqa bawdada,” ayuu Wenger ku yidhi shabakada khaaska ah ee naadiga.
“Arinta kaliya ee aanaan garanayni waxa weeyaan inta uu leeg yahay dhaawaciisu maxaa yeelay baadhitaanka waxaa la guddo gallay 48 saacadood ka hor uun. Taas oo la dhamaystiray maanta [Arbacadii].
“Jack si fiican buu u soo kabanayaa, wali kuma soo noqon tababarka. Mathieu tababarka ayuu qaatay, waxaanu safan doonaa Sabtida.
“Gabriel waa laga yabaa inuu safto todobaadka dambe, wuxuu ku soo noqonayaa tababarka Axada ama Isniinta.”
Real Madrid Oo Wada hadalo Rasmi Ah La Furtay Yaya Toure
07/01/2015 Khadar Dirir
Manchester United vs Southampton 1-0 – All Goals & Highlights EPL
Man United Oo Ka Noqotay Dalabkii Jose Mourinho Iyo Sababta Ku Kelliftay